‘लिलिबिली’ दोश्रो गीत, जसितालाई के भन्दैछन् प्रदीप ? « Ramailo छ
‘लिलिबिली’ दोश्रो गीत, जसितालाई के भन्दैछन् प्रदीप ?
फिल्म ‘लिलिबिली’ को शिर्ष गीत रिलिज भएको छ । स्कटल्यान्डमा छायाँकन गरिएको गीतमा नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङ फिचरिङ छन् । एसडी योगीको स्वर तथा संगीत रहेको गीतको शब्द एकतारेले लेखेका हुन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको लिलिबिलीको शिर्ष गीतको भिडियो यस्तो बनेको छ :
मिलन चाम्स निर्देशित ‘लिलिबिली’ लाई निर्देशक चाम्स, गोविन्द शाही र सुदीप खड्का मिलेर बनाएका हुन् । फिल्ममा प्रदीप र जसितासँगै नायिका प्रियंका कार्की पनि मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छन् । फिल्म चैत ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मको एउटा रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भैसकेको छ ।
यस्तै फिल्म युनिटले उत्कृष्ट एक लाख बराबरको पुरस्कार राशी सहित कभर भिडियो प्रतिस्पर्धा पनि घोषणा गरेको छ ।